ဖေ့ဘွတ်ရဲ့ Community Standard ဆိုတာဘာလဲ (၁)? – Think Before You TRUST
Home>>ပညာပေး>>ဖေ့ဘွတ်ရဲ့ Community Standard ဆိုတာဘာလဲ (၁)?
တွေးပြီးမှယုံJune 16, 2019
ဖေ့ဘွတ်ရဲ့ Community Standard ဆိုတာဘာလဲ (၁)?
Facebook Account တွေ ပျက်သွားတယ်။ Facebook Page တွေ ပျက်သွားတယ်။ ကိုယ့်ကို Facebook က အကောင့်တွေ ပေချ့်တွေကို ဖျက်ကြောင်း အကြောင်းကြားတဲ့အခါမှာ သူ့ရဲ့ Community Standard နဲ့ မညီတဲ့ ပိုစ့်တွေကို တွေ့လိုဆိုပြီး အကြောင်းကြားတာကို သိကြမှာပါ။ Community Standard ဆိုတာဘာလဲ (၁)? Facebook သုံးစွဲသူတွေဟာ ဘာတွေကို ပိုစ့်မလုပ်ဖို့ ရှောင်ကျဉ်ရမှာလဲဆိုတာကိုသိဖို့ တွေးပြီးမှယုံက ဖေ့ဘုတ်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စံနှုန်းတွေအကြောင်းကို ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ အကောင့်တွေ၊ ပေချ့်တွေ မပျက်ရအောင် ဘယ်လိုစံနှုန်းတွေကို မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမယ်ဆိုတာကို တခြားသူငယ်ချင်းတွေသိအောင် အောက်ကလင့်မှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါအုံးနော်။
(၁) အကြမ်းမဖက်ရ မခြိမ်းခြောက်ရ
Facebook သုံးစွဲသူတွေအတွက် လုံခြုံရေးဆိုတာ Facebook ရဲ့ ဦးစားပေးတာဝန်တစ်ခုပါ။ Facebook သုံးစွဲသူတွေအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း အများပြည်သူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေမယ်လို့ ယူဆရင် အဲဒီ ယူဆရတဲ့ Post ရယ် တင်တဲ့ Account ရယ်ကို Facebook ကနေပြီး ဖယ်ရှားပါတယ်။ နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင်တော့ ဖျက်ပစ်တာပေါ့။ ဒါတင်မကသေးဘူးနော် လိုအပ်တယ်ထင်ရင် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေ အရေးယူဖို့အတွက်ပါ Facebook က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့တို့ကို သိစေချင်တာက ပြောင်ဟယ်နောက်ဟယ်ပါဆိုပြီး ဗုံးခွဲမယ်တို့ လူသတ်မယ်တို့ လို ဆဲဆိုတာမျိုး အကြမ်းဖက်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့နော်။ အကောင့်ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကံဆိုးရင် Facebook နဲ့ ရဲနဲ့ပေါင်းပြီး အဖမ်းခံရနိုင်ပါတယ်။
(၂) မိမိကိုယ်ကိုယ် ထိခိုက်စေမှုကို ရှောင်ကြည်ပါ
ခေါင်းစဉ်ကြီးက မိမိကိုယ်ကိုယ်ထိခိုက်စေမှုကို ရှောင်ကြဉ်ပါဆိုလို့ ခေါင်းမစားသွားပါနဲ့ဗျို့။ သူဆိုလိုချင်တာက ယူတို့ကို ထိခိုက်စေတဲ့ အရာတွေနဲ့ ထိခိုက်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ အကြံပေးချက်တွေကို Facebook က တားမြစ်ထားတာပါ။ ဥပမာ ပိန်ဆေးကြေညာတွေကို Facebook မှာ ကြေညာခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒီကြေညာတွေကြောင့် လူတွေမှာ အစားအသောက်မမှန်တဲ့ရောဂါတို့၊ အစာအိမ်ရောဂါတို့ ဖြစ်စေတာမို့လို့ပါ။ နောက်ပြီးတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတာမျိုးတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို နာကျင်အောင် လုပ်တဲ့ စိတ္တဇပိုစ့်တွေကိုလည်း Facebook မှာ တင်လို့မရပါဘူး။ အကယ်၍ ဂရုမစိုက်ဘူးကွာဆိုပြီး တင်မယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီ ပိုစ့်ကို ဖျက်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီ နံပါတ်နှစ်အချက်ကိုလည်း သတိထားလိုက်ရအောင်။ အကယ်၍ သူများတွေတင်ရင်လည်း Report ထုပါလို့။
(၃) အနိုင်မကျင့်ရ၊ မနှောင့်ယှက်ရ
နံပါတ်သုံးအချက်ကတော့ ဖေ့စဘုတ် ဆယ်လီ ဆယ့်တစ်လီတွေ သဘောမကျမယ့် အချက်ပါ။(ဆယ်လီတွေကတော့ လူတစ်ယောက်ကို စခရင်ရှော့တွေတင်ပြီး ဝိုင်းအနိုင်ကျင့်တာမျိုး လုပ်တတ်တယ်။ အဲဒါတွေကို Facebook Team က မသိသေးလို့နော်။ သိလို့ကတော့ မလွယ်ဘူး။ ဤကား စကားချပ်)။ Facebook ပေါ်မှာ သူများကို အရှက်ခွဲတာတို့ အနိုင်ကျင့်တာတို့ဆို Facebook Team က လုံးဝ သည်းမခံပါတဲ့ ခင်ဗျာ။
နောက်ပြီးတော့ မင်းပုံတွေတင်လိုက်ရမလား ငါ့ကို ဘေလ်တသောင်းဖိုး ဖြည့်ပေးဆိုပြီး နှောင့်ယှက်တာမျိုးကလည်း Facebook က ခွင့်မလွတ်တဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။ အနိုင်ကျင့်ခွင့်မပေးဘူးဆိုလို့ Facebook က ယူတို့ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ကို ပိတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စဆိုရင် ပြောလို့ရတယ်။ ဥပမာ YBS တွေ အသုံးမကျဘူးတို့။ တတိုင်းပြည်လုံး သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်နေပြီတို့ ဆိုတာမျိုးတွေ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူများကို အနိုင်ကျင့်တာ အရှက်ခွဲတာ နှောင့်ယှက်တာမျိုးတွေကိုတော့ ကာယကံရှင်ကတိုင်ရင် အရေးယူပါတယ်။ အရေးယူတယ်ဆိုတာက အရင် ပိုစ့်တွေမှာပြောသလိုပါပဲ အကောင့်ဖျက်တာ ပိတ်ပြစ်တာမျိုးပါ။
“ တပါးသူ၏ လူမျိုး၊ နိုင်ငံ၊ ဘာသာရေး၊ ဒေသ၊ ကျား/မ လိင်ကွဲပြားမှု ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူမှု၊ မသန်စွမ်းသူများနှင့် နာတာရှည်ရောဂါများကြောင့် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေသူများကို အကြောင်းမဲ့ ဖြစ်စေ၊ ထိခိုက်နာကျင်စေလိုမှုကြောင့် ဖြစ်စေ တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်ပြောဆိုသော စကားများ “ အပေါ်ကစာကတော့ Facebook က သတ်မှတ်ထားတဲ့ အမုန်းစကားပါ။ အဲဒီ အမျိုးအစားထဲက တမျိုးမျိုးကို ပြောမိရင် Facebook က လုံးဝလက်မခံပါတဲ့ဗျာ။ Report ကျွေးလိုက်ရင် စစ်ဆေးပြီး ချက်ခြင်းဖျက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဟိုစတစ်ကာလေးထဲကလိုပြောရရင် အမုန်းစကားမပွားရဘူးနော်။
(၅) ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုတွင် ပါဝင်သည်များကို ကြိုတင်အသိပေးပါ
ဒါကဘာလဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတို့ ဗီဒီယို ဖိုင်အနေနဲ့ တင်မယ်ဆိုရင် ကြည့်မယ့် သူတွေသိဖို့ ဗီဒီယိုဖိုင်က ဘာအကြောင်းလဲဆိုတာ အပေါ်မှာစာရေးထားဖို့ လိုတယ်လို့ Facebook က သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ရေးရင်လည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးရမှာပါ။ အကယ်၍ ခင်ဗျားတင်လိုက်တာက သရဲကားထဲက အခန်းတစ်ခန်း ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားက ဘော်ဒါတွေကြည့်အောင် HD တဲ့ဟေ့ဆိုပြီး တင်လိုက်မယ်။ ဘော်ဒါတစ်ကောင်က HD မှတ်ပြီး ဖွင့်လိုက်တယ် ဒါပေမယ့် သရဲ ပုံတွေ့ပြီး ကြောက်သွားရတာမျိုးကို Facebook က တားမြစ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်က ဗီဒီယိုဖိုင်တင်မယ်ဆိုရင် သရဲ ဆိုသရဲ ၊HD ဆို HD ဖြစ်တယ်ဆိုတာ စာမှန်မှန်ကန်ကန်ရေးပြီး တင်ရမှာပါ။ နှလုံးရောဂါမထဖို့ ဖေ့စဘုတ်စံနှုန်းကို လိုက်နာစို့။
(၆) အဖော်အချွတ်များကို ကန့်သတ်ထားပါသည်။
Facebook မှာ ဆင်းရဲသားကားတွေ ဆင်းရဲသမီးကားတွေ တင်လို့မရပါဘူး။ ဆင်းရဲသားစာအုပ်တွေလည်း တင်လို့မရပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အသက်မပြည့်သေးတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ရိုက်တဲ့ ဆင်းရဲသားကားတွေ ဆင်းရဲသမီးကားတွေဆိုရင် ပိုပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် တားမြစ်ထားပါတယ်။ လူဆယ့်ရှစ်ယောက်ပြည့်မှ ကြည့်ရမယ့်ကားတွေဆိုရင် Facebook မှာ မတင်ကြဖို့နဲ့ တင်မယ်ဆိုရင်လည်း Reply ကိုသွားဖို့ (အဲလေ) တင်မယ်ဆိုရင်လည်း တခြား Website တခုခုကိုသာ သုံးဖို့။ ကလေးတွေကို စည်းရုံးသလို မဖြစ်စေဖို့ အထူးသတိထားရပါမယ်။ သတိမထားရင်တော့ အကောင့်ပျက်ပါမယ်လို့။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်ခိုက်ရေးသားသူတွေကို တရားစွဲဖို့ အမိန့်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှား
Facebook Account များခိုးယူ၍ ငွေလိမ်လည်ချေးငှားခြင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင် ပြုလုပ်ခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သို့ တိုင်ကြားနိုင်
သင်မှန်မယ်ထင်နေတဲ့ သတင်းတွေဟာ မှားနေခဲ့မယ်ဆိုရင် …..
ဖေ့ဘွတ်ရဲ့ Community Standard ဆိုတာဘာလဲ (၂)?
ဂျင်းသတင်းတွေ မမိအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ